Sidee loo sameeyaa qoraal dood leh? | Sameynta iyo daraasadaha
Sidee loo sameeyaa qoraal dood leh?
Maite Nicuesa | 23/11/2021 23:51 | La cusbooneysiiyay 24/11/2021 15:58 | Talooyin
Sidee loo sameeyaa qoraal dood leh? Fahamka wax-akhrisku waa lama huraan si loo qoto dheereeyo macnaha mawduuca lagu soo saaray qaab qoraal ah. Waxaa jira noocyo kala duwan oo qoraal ah. Waa maxay sifooyinka qaabka doodaha? Sida aad ka soo qaadan karto fikradda, waa qoraal ku wareegaya mowduuc khuseeya. Mawduuca ku jirana waxa uu muujinayaa isku xidhka fikradaha waaweyn iyo kuwa sare ee xoojiya ra'yiga.
Waa dhexdhexaadin xogeed oo ka dhigan soo jeedinta qiimaha akhristaha. La-tashiga maqaalka, waxaad ku ballaarin kartaa aragtidaada adiga oo raacaya aragtida qoraaga shaqada daabacay. Fikradda ugu weyn waxay ku saleysan tahay xogta taageeraya adkeynta qoraalka dhexe.
Qoraal si fiican ugu cad akhristaha markuu sameeyay dib-u-akhrisyo kala duwan. Dhab ahaantii, dooddu waxay ku horumarsan tahay qaybta dhexe ee qoraalka waxayna si fiican u habaysan tahay gabagabada. Dhammaadka qoraalka, isku dubaridka waxa ilaa hadda la sheegay ayaa la sameeyaa. Iyadoo la horumarinayo tirinta fikradaha, wada-hadal ayaa dhexmara qoraaga iyo akhristaha. Dhab ahaan, Qoraagu si toos ah ayuu u dacwoodaa interlocutor. Qoraal ka mid ah sifooyinkan ayaa ku martiqaadaya milicsiga. Waxaana dhici karta in qofkii ishaas la tashaday uu fikirkiisa ka beddelo arrin gaar ah. Sida loo sameeyo qoraal dood leh?
1 1. Hordhac iyo macnaha guud
2 2. Doorashada mawduuca
3 3. Isticmaal doodda ka timid maamulka
4 4. Gabagabo xiiso leh
5 5. Doorashada magac wanaagsan
1. Hordhac iyo macnaha guud
Hordhacu wuxuu u taagan yahay soo koobiddiisa. Si kastaba ha ahaatee, waxaa habboon in fiiro gaar ah loo yeesho xariiqyada qoraalka bilaabaya. Waa halkaas halka laga helo nuxurka mawduuca dhexe. Sidaa darteed, fahamka hordhacu wuxuu fududeeyaa in la fahmo maqaalka oo dhan. Qoraagu wuxuu soo bandhigay arrinta xiisaha leh. Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad abuurto qoraal leh astaamahan, waxaad dhiirigelin ka qaadan kartaa tusaalooyin kale.
2. Doorashada mawduuca
Waxaa jira mowduucyo badan oo noqon kara mawduuca falanqaynta. Si kastaba ha ahaatee, arrimaha sida tooska ah ula xiriira xilliga hadda jira, waxay ku xiran yihiin xiisaha akhristaha. Haddaba, Waxa kale oo ku habboon in la dhigo mawduuca oo lagu dhejiyo macnaha guud si loola xidhiidho dadka la beegsanayo. Sidan, waxaa suurtogal ah in lagu kiciyo dareenkooda.
3. Isticmaal doodda ka timid maamulka
Si loo sii qoto dheereeyo dulucda qoraalka dhexe, waxa kale oo suurtogal ah in lagu xisaabtamo wax ku biirinta codadka khubarada ah ee arrinta. Sidan, waxaad tixraaci kartaa tabarucaada takhasuska leh ee la wadaaga aqoontooda bulshada iyada oo loo marayo daabacaado ay suurtagal tahay in lagu tixraaco. Xirfadlaha sharafta leh wuxuu dhiirigeliyaa kalsoonida wuxuuna kiciyaa qaddarinta dad badan. Sidaa darteed, ra'yigaagu wuxuu ku salaysan yahay xog qiimo leh. Xog qiimo leh oo gaadha akhristaha qoraal dood leh oo ka kooban tixraacyo iyo tixraacyo muhiim ah.
4. Gabagabo xiiso leh
Qoraal dood leh ayaa si toos ah u soo jiidanaya milicsiga dhex-dhexaadiyaha. Sidaa darteed, waxa kale oo suurtogal ah in qoraalka lagu dhameeyo su'aal furan. Su'aal kugu martiqaadaysa inaad sii waddo u fiirsashada waxa lagu sheegay daabacaadda.
5. Doorashada magac wanaagsan
Dhammaan qaybaha qoraalka waa muhiim, maadaama ay si fiican isugu xidhan yihiin. Cinwaanka wanaagsan, dhab ahaantii, wuxuu noqon karaa mid go'aan qaadasho si uu u kiciyo xiisaha akhristaha.
Ma aha oo kaliya ku habboon in la daryeelo waxa la sheegayo, laakiin sidoo kale in la siiyo qoraalka qaabka la rabo. Tusaale ahaan, waxaad ku qaabayn kartaa nuxurka cutubyo gaagaaban. Soo bandhigid nadiif ah ayaa gudbisa dareen nidaam ah. Aragtida ugu horreysa ee togan waxay kordhisaa dhiirigelinta kuwa u dhuun daloola nuxurka shaqada. Sidee loo sameeyaa qoraal dood leh? Iyadoo dareen xasaasi ah, hal-abuurnimo, fiiro gaar ah u leh faahfaahinta iyo milicsiga. Fikradaha labaad waa inay xoojiyaan qoraalka ugu muhiimsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Sameynta iyo daraasadaha » Noticias » Talooyin » Sidee loo sameeyaa qoraal dood leh?
Maxaa la sameeyaa si aad ugu shaqayso dhaqtarka xoolaha
Waa maxay xarunta waxbarashada joogtada ah?